စိတ်ကူးယဉ် ပုံရိပ်စများ: March 2008
ည ၂-နာရီ လောက်တွင် ဆရာဝန်ကြီး အိမ်ကို ဖုန်းလားသည်။ လူနာအသန်းအသန်ဖြစ်နေလို့ အမြန်ဆုံးလာစေကြောင် ဖုန်းဆက်သူကပြောတယ်။ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လာဖို့လဲ သူက အနူးအညွတ်တောင်းပန်တယ်။ ဆရာဝန်ကလည်း ညအချိန်မတော် ဖြစ်နေတာရယ် မိုးအသည်းအသန်ရွာနေတာကြောင့် မသွားချင်းဘူး ပြီးတော့ လူနာအိမ်ကလည်း မြို့စွန်ဘက်ဖြစ်နေသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မတတ်နိုင်ဘူး လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကိုကယ်ရမှာ ဖြစ်နေတော့။ လူနာအိမ်ကို ခဲခဲယဉ်းယဉ်းနဲ့ ဆရာဝန်ရောက်လာတော့ အိပ်ရာာပေါ်မှာ ညည်းတွားနေတဲ့ လူကြီး တစ်ယောက်ကို တွေ့တယ်။
“ဒေါက်တာ ကျွန်တော့်ကို ကယ်ပါဦး။ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် သေရတော့မယ်လို့ထင်နေတယ်”
“မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်ဖူးလားခင်ဗျ”
လူနာကို ဆရာဝက ခဏ စစ်ဆေးလိုက်ပြီး ၀မ်းနည်းတဲ့အသံနဲ့ ပြောလိုက်တယ်-
“ခင်ဗျား သေတမ်းစာ ရေးပြီးပလား”
“ဒေါက်တာ . . . ဘာလဲ . . . ကျွန်တော် တကယ်ပဲ သေရတော့မယ်လို့ ဆိုလိုတာလား . . . ဟင့်အင်း . . . ဟင့်အင်း . .. ကျွန်တော် မသေချင်သေးဘူး ကျွန်တော့ကို ကယ်ပါဦးဗျ”
“ခင်ဗျားဆီမှာ သားသမီးတွေရှိလား သူတို့ကို ချက်ချင်းခေါ်လိုက်ပါ . . . ပြီးတော့ ဆွေမျိုးတွေကိုပါ ခေါ်ဖို့မမေ့နဲ့”
“ဘုရား . . . ဘုရား . .. ကျွန်တော် တကယ်သေမှာလား ဒေါက်တာရယ်”
“မသေပါဘူး ခင်ဗျားရဲ့ ကျန်းမာရေးက ကျွဲရိုင်းကြီးတစ်ကောင်လို ကောင်းနေသေးတယ် . . . အဲ. . . ဒါပေမယ့် ဒီလို ရာသီဥတုနဲ့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း အရူးလုပ်ခံတာမျိုး အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဗျ။ နားလည်လား”
အခုတလော အပျင်းကြီးနေတာနဲ့ သူငယ်ချင်းမေလ်းပို့ထားပေးတာတွေပဲ တင်ပေးနေတာ ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးပဲ လက်ကျန်ရှိတော့ဘူး နောက်တော့တော့ စာရိုက်ရတော့မယ် -
မေလ်းက သူငယ်ချင်းပို့ထားတာကို ပြန်တင်ပေးတာပါ-
ဦးနှောက် နည်းနည်းချောင်နေသူကို စိတ်ရောဂါ ကု ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်တော့ သူ့မိတ်ဆွေတွေက အံ့အားသင့်ပြီး ၀ိုင်းမေကြတာပေါ့-
“ဟေ့ ထုံးကြီး မင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်တာလဲကွ”
“ဆေးရုံမှာ စမ်းသပ်မှု တစ်ခုလုပ်တယ် သော့ပေါက်ကနေ ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့သူကို ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ပြုမယ်တဲ့။ တစ်ယောက်က ပခုံးကြောင့် ဖြတ်မထွက်နိုင်ဘူး။ နောက်တစ်ယောက်က သော့ပေါက်မှာငြိနေတယ်။ ငါကတော့ မဖြတ်ထွက်ဘူးလို့ ငြင်းလိုက်တယ်”
“ငါ အရုးမှ မဟုတ်ပဲ။ တခြားဘက်မှာ သော့ကို သော့ပေါက်မှာ တန်းလန်းချိန်ထားတာ ငါမြင်နေရတာပဲကိုကွ”
တခါတုန်းက စမိုင်းမေ ရပ်ကွက် ယိမ်းအဖွဲ့ သင်္ကြန်ယိမ်းကို ပြောတာနော် ကရင်ဒုံးယိမ်းဟုတ်ဖူးနော် ညနေခင် ဗဟိုမဏ္ဍပ် (စာလုံးပေါင်းမှားနေပါတယ် သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြပါ) မှာ သွားက ပြရမယ်ဆိုတော့ အလှတွေပြင်ပြီး သွားတာပေါ့။ စမိုင်းမေကို အလှပြင်ပေးရင် တအား အလှပြင်ခံချင်တာ။ နေလို့ကောင်းတယ် မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီး မိပ်ကပ်လေး ရိုက်ပေးရင် နေလို့ အရမ်းကောင်း။ တခါတလေ အလှပြင်ထားရင် လှတယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ် ။ ပြင်တိုင်းလည်း မလှဘူးသိလား။ ညဘက် အိမ်ကို ပြန်ရောက်တော့ တူလေး က အိမ်ရောက်နေတယ် အကိုတို့ သူ့ကလေးထားပြီး လျှောက်လည်ကြတာလေ။ ကလေးက အခုမှ ငယ်ငယ်လေးပဲ၇ှိသေးတယ်။ စမိုင်းမေလည်း ဘယ်ရမလဲ အလှတွေပြင်ထားတော့ ကိုယ့်တူကို ပြချင်တာပေါ့။ မီးကလည်း ပျက်နေတော့ ကလေးက မမြင်ရဘူးလေ ဒါနဲ့ ဖယောင်းတိုင်ယူပြီး မျက်နှာရှေ့ထားပြီး အရီးကိုကြည့် လှလားဆိုပြီးမေးလိုက်တာ . . . အဟဲ့ .. . ကလေးက လှတယ်လို့ ပြောမယ်ထင်လား . . .သရဲတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ ငယ်သံပါအောင်အော်ပြီး အမေဆီကို ပြေးသွားလိုက်တာ . . .
ဂရေ့စ် (ခ) လဇွန်ဆိုင်းဂျာသို့ တမ်းချင်း
ပထမဆုံး ပွင့်တဲ့ ပန်းကလေးပါပဲ။
ငါ ပထမဆုံးဖူးရတဲ့ အလင်းရောင်ပါ။
မင်း ကချင်စကား မတတ်တော့ဘူး။
မေခ - မလိခ မြစ်ဆုံကို
ဟိုး … ရှင်မွေယန်/နန်းယွန်း
ဗန်ကောက်မှာ အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်
ထောင်ကာ အက ကို
မင်းမှာ ရိုးရာဝတ်စုံလည်း မရှိတော့ဘူး။
ငါ မင်းကို လေးစားပါတယ်။
" အင်နာစတာရှား " တို့လို
မင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင် … ။
မေခ - မလိခ မြစ်ဆုံမှာ
ငါဆက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ် ကချင်မလေး။
သူငယ်ချင်း မေလ်းပို့ထားတာလေးကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါရှင့်-
ညမွှေးပန်းဟာ ညမှမွှေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့လည်း မွှေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအနည်းငယ်ကသာ နေ့အခါမှာ ရှုရှိုက်မိကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နေ့အခါမှာ လူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ ပျံ့လွှင့်နေလို့ပါ။ တကယ်လို့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ နေ့အခါမှာလည်း တည်ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင် ညမွှေးပန်းဟာ အရမ်းပူပြင်းတဲ့ နေ့ခင်းမှာတောင် မွှေးပါတယ်။